မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းထူထောင်ရန် ANA ထပ်မံ ကြိုးစားမည်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်းကြီးဖြစ်သည့် ANA Holdings Inc. က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းတစ်ခု ထူထောင်ရန် ထပ်မံကြိုးစားသွားမည်ဟု ပြောကြားကြောင်း ဂျပန်သတင်းစာတစ်စောင်က ရေးသားထားသည်။ “မိတ်ဖက်အသစ်တစ်ဦးကို ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ANA ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Shinya Katanozaka က မကြာသေးမီက.
International Gateway (IGW) ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမျိုးစုံ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် La La Kyi (လာလာကြည့်) ပလက်ဖောင်းအတွက် Golbal Technology Group နှင့် မိတ်ဖက်ပါတနာများ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ နယ်စပ် ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ် ဆာလောင်နေတဲ့နေရာ
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ - ကောင်းကျော ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကလေးများ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကွာရှိ ထိုင်းအစိုးရကျောင်းသို့ သွားရန် ကားပေါ်တက်နေကြပုံ။ ဓာတ်ပုံ-ဗစ်တိုးရီးယား မီလ်ကို
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သိသိသာသာ လျော့ကျ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချမှု (Business Confidence) သည် ယခင်နှစ်ကထက် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားသည်ဟု စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယမန်နှစ်က ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လျော့ကျသွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်.
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးအမှု ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဟု အစိုးရက ပြောကြား
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတဦးထင်ကျော်က ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
4G ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ် ထပ်မံရယူရန် တယ်လီနောက ဒေါ်လာသန်း ၈၀ ထပ်မံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
တယ်လီနောမြန်မာအနေဖြင့် ၁၈၀၀ MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်၏ ၂ X ၁၀ MHz ကို ထပ်ဆောင်း ရယူရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ထပ်မံရင်းနှီးမြုပ်နှံသွားမည်ဟု ပြောကြားသည်။ ၁၈၀၀ MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်၏ ပထမဆုံး ၂ X ၁၀ MHz ကို.
ရုရှားထုတ် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အပေါ့စား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ တပ်တော်ဝင်
ရုရှားနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်သည့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အပေါ့စား တိုက်ခိုက်ရေး ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်သည့် Yak-130 လေယာဉ် ၆ စီးကို တပ်မတော်(လေ)အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တပ်တော်ဝင်ခဲ့သည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ပြောကြားသည်။
တောဆင်ရိုင်းများကို ကယ်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှု၌ ကမ္ဘောဇနှင့် ရွှေတောင်တို့ ပူးပေါင်းပါဝင်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆင်များမှရရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော တရားမဝင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုကို ပပျောက်စေရန် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့် လှုပ်ရှားမှုကြီး အောင်မြင်စေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကြီးများဖြစ်သော ကမ္ဘောဇ ကုမ္ပဏီများအုပ်စုနှင့် ရွှေတောင် လုပ်ငန်းစုတို့က မိုမိုတို့အတွက် ရင်တွင်းစကားသံ (VOICES FOR MOMOS) နှင့် ပူးပေါင်းကာ ပံ့ပိုး ကူညီမည်ဖြစ်သည်။